Madaxweynaha oo ku mashqulay Cadado &Dh.Mareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay gaaray degamada Cadaado, xalayna baryey ayaa weli halkaas ku sugan, waxaana weli furmin shirkii maamulka loogu dhisi lahaa gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud ayaa ilaa habeenimadii xalay ilaa maanta kulamo guud iyo kuwa gaar gaar ahba la lahaa mas’uuliyiinta maamulka Ximin iyo Xeeb, siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda labada gobol Galguduud iyo Mudug.
Kulmada ayaa looga wada hadlay arrimo xasaasi ah, iyadoo la ogyahaya in maamulka Ximan iyo Xeeb diidaay go’aan uu horay madaxwene Xasan u soo saaray oo ahaa in casimaadda maamulka la dhisayo tahay Dhuusa Mareeb.
Maamulka Ximan iyo Xeeb iyo qolooyin kale oo daba gabanaya ayaa raba in go’aanka caasimaddu kasoo baxo ergada ka shireysa maamulka loo dhisayo Mudug iyo Galgaduud.
Haddaba, mas’uuliyiintii iyo siyaasiyiintii la shirtay madaxweynaha ayaa lagu waramayaa in ay soo bandhigeen sharuudo dhowr ah oo ay tahay in laga hormariyo fulintooda qabsoomida shirka.
Wxaa warar hoose oo soo baxaya sheegayaan in laga dalbaday madaxweynaha inuu dib uga laabto go’aankii uu qaatay ee ahaa in caasimaddu ay noqonayso Dhuusa-mareeb.
Hase ahaatee madaxweyne Xassan Sheekh ayaa u muuqda mid ku adkeysanaya go’aankiisii ahaa in Dhuusa-mareeb ay noqonayso Caasimada Maamulka Gobollada Dhexe, sababta booqashadiisa Cadaadana tahay kaliya inuu furo shirka dhismaha maamulka Gobollada Dhexe.
Loolanka ka dhex jira degmooyinka Dhuusa Mareeb iyo Cadaado ayaa u muuqda iney madaxweynaha ka mashquuliyeen howlo badan oo uu qaban lahaa, waxeyna labadaas degmo noqdeen labada magaalo ee Xasan Sheekh tiiba labo habeen is xiga baryey intuu madaxeynaha yahay.
Madaxweyne Xasan wuxuu Dhuusa Mareeb tegay saddex jeer, isagoo inta badan waqti badan ku bixinayey siduu xal ugu heli lahaa muranka labada magaalo oo dad isku beel ah ay degan yihiin.
Reer Dhuusa Mareeb oo wata kooxo kale ayaa horay u diiday in shirka maamul sameynta lagu qabto Cadaado, laakiin dood dheer kadib waxaa 8-dii bishaa April Madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay go’aan.
Wuxuu ahaa go’aankaasi in reer Dhuusa Mareeb lagu qanciyey iney caasimadda qaataan, reer Cadaadana u ogolaadaan martigelinta shirka maamul sameynta labada Gobol ee Muqdug iyo Galgaduud.
“Caasimadda dowlad goboleedka dhalan doonta waa Dhuusa Mareeb, shirkana waxaa gogoshiisu tahay Cadaado oo 11-ka April ayauu shirku furmayaa, go’aankaas ayaa dowladdu agaartay” ayauu madaxweyne Xasan Sheekh ka sheegay Dhuusa Mareeb.
Go’aamkaas ayaa buuq badan laga horyimid, waxaana taasi keentay in maanta oo ah 15-ka April uusan weli furmin shirku, madaxweynaha oo halkaas shalay tegayna uu weli joogo.
Alshabaab oo weli askareynaya dhallinyarada Kenya